चुनाव प्रचार गर्दै गर्दा नायकलाई अचानक हृदयघात, अस्पतालमा मृत्यु | सु-सुचित नेपालको चित्र
चुनाव प्रचार गर्दै गर्दा नायकलाई अचानक हृदयघात, अस्पतालमा मृत्यु
भारतको रामनाथपुरमा शनिबार दिउँसो चुनाव प्रचारको क्रममा जेके रितेशलाई अचानक हृदयघात भयो । ४६ वर्षका रितेशलाई अस्पताल पुर्याइयो जहाँ उनको मृत्यु भयो । रितेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को रामनाथपुरम लोकसभा सिटबाट उम्मेद्वार नयनार नागेन्द्रनका लागि प्रचार गरिरहेका थिए ।
रितेश १५ औं लोकसभामा डिएमके पार्टीका सांसद पनि भए । जेके रितेशलाई अन्तिमपटक फिल्म एलकेजीमा देखिएको थियो । उनको परिवारमा उनकी श्रीमती जोथीश्वरी र तीन सन्तान छन् ।
सहकर्मीले लेखे भावुक सन्देशः
फिल्म एलकेजीमा उनीसँग काम गरिसकेका नायक आरेज बालाजीले रितेशको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै एउटा नोट लेखेका छन्, ‘जेके रितेश सर गुमाएको खबर सुनेर स्तब्ध छु । उनी ४६ वर्षका मात्र थिए । चाँडै नै बिते । उनले मलाई आफ्नो भाइजस्तै व्यवहार गर्दथे । उनले धेरैलाई सहयोग गरे । यो पीडालाई बयान गर्न शब्द छैन ।’
बालाजीे अर्को एक ट्वीटमा लेखे, ‘मलाई तपाईंको धेरै याद आउनेछ सर । तपाईंले मलाई आफ्नै भाइजस्तै ठान्नुभयो । तपाईं एक महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । तपाईंलाई तीन सन्तानसहित सुन्दर परिवारलाई टाढा लैजाने भगवान निकै क्रुर छन् ।’
जेके रितेशनले डिएमकेसँग आफ्नो राजनीतिमा आफ्नो करियरको सुरुवात गरे तर सन् २०१४ मा उनले पार्टी छोडे र ब्क्ष्ब्म्ःप् मा समावेश भए । यद्यपि, यसअघि नोभेम्बर सन् २०११ मा एक जमिन हडपेको मामलामा पक्राउ भएपछि उनी चर्चामा आएका थिए । उनीमाथि भारतीय मूलका एक अमेरिकी नागरिकलाई जमिन किनिदिने बचन दिएको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
भारतको लोकसभामा भयो यस्तो अचम्म, हेर्ने सबै चकित !
शक्तिशाली भूकम्पमा १२ को मृत्यु, १३४ घाइते
अस्पतालमा गोली चल्यो, ५ जनाको मृत्यु
नेपाली डाक्टर र नर्सहरुलाई खुसीको खबर !
पूर्व राष्ट्रपतिको मृत्यु
इन्सेफ्लाईटिसले लियो १४८ जनाको ज्यान, शनिबारसम्म विद्यालयमा छुट्टी, धारा १४४ लगाइयो